Fifandimbiasana ankehitriny sy ankehitriny mivantana: fahasamihafana sy fitoviana | Fitaovana maimaim-poana
Isaac | 28/09/2021 09:00 | fampianarana, General
Ianao dia tokony manavaka ny ankehitriny sy ny ankehitriny mivantana. Samy tena zava-dehibe izy roa, ary ampiasaina amin'ny lafiny indostrialy sy eo amin'ny sehatra anatiny hampiasa fitaovana marobe. Manomboka amin'ny milina indostrialy, hatramin'ny fitaovana ao an-trano, amin'ny alàlan'ny fitaovana finday, sy ny hafa singa elektronika.
Ho fanampin'izay, ho hitanao koa ny fitoviana, satria misy izy roa eo anelanelany DC sy AC, ary koa tantara iray mampihetsi-po sy tolona eo amin'ny mpamorona malaza roa izay nahatonga ny habibiana sasany hampiroborobo azy ireo ...
1 Inona no atao hoe renirano?
2 Inona ny ankehitriny mivantana?
2.1 Fampiharana sy fiovam-po
3 Inona no atao hoe AC?
4 DC vs AC: tombony sy fatiantoka
4.1 Fanovana AC / DC
Inona no atao hoe renirano?
Una amin'izao fotoana izao fikorianan-javatra izy io, na rano mikoriana, na onja elektrika. Amin'ny tranga misy ny herinaratra, ny tena mitranga dia misy mikoriana elektronika mivezivezy ao afovoan'ny mpampita, na dia tsy tazana aza izany.
Ity iray ity herinaratra Izy io dia mety ho karazana roa ifotony ...
Inona ny ankehitriny mivantana?
Araka ny efa fantatrao raha mamaky matetika an'ity bilaogy ity ianao, ny DC, koa nohafohezina hoe CC (na DC amin'ny teny Anglisy), dia misy onja iray misy lalana iray. Izany hoe, ny fikorianan'ny electron dia ho any amin'ny lalana manokana amin'ny alàlan'ny conducteur eo anelanelan'ny teboka roa samy hafa ny mety sy ny herinaratra. Raha tokony hanao sary ny ony amin'ny graf isika, dia hiseho ho tsipika mitohy hatrany.
Ity arus mivantana ity dia novokarina voalohany tamin'ny taona 1800, noho ny bateria noforonin'ilay mpahay fizika italianina Alessandro Volta. Ny toetran'ity ony ankehitriny ity dia tsy takatra tsara tamin'izany fotoana izany, saingy zava-bita lehibe izany. Tamin'ny 1870 sy ny fiandohan'ny taona 1880 dia nanomboka namokatra herinaratra ireo toby famokarana herinaratra, ho an'ny jiro orinasa sy trano taorian'ny namoronana ny jiro. Thomas Edison.
Mba hiarovana an'ity karazana onjampeo ity dia tonga nanao fampisehoana tena tsy mendrika i Edison, niezaka manala baraka an'i Nikola Tesla, milaza fa mampidi-doza kokoa ny diany ankehitriny. Mba hanaovana izany dia tonga nanao fampisehoana ampahibemaso tamin'ny famonoana biby isan-karazany i Edison. Tamin'ny fiandohan'ny taona 1903 dia olona iray alina no nanatri-maso ny fomba nametrahany herinaratra sy famonoana elefanta tamin'ny alalàn'ny 6600 volt. Na izany aza, ny elefanta dia efa nomena karaoty voapoizin'ny sianide mba hahazoana antoka fa maty io. Ireo hetsika rehetra ireo dia nantsoina hoe ny Ady amin'ny onja ankehitriny.
Fampiharana sy fiovam-po
Ity riaka mivantana ity dia nosoloina tsimbadika tsikelikely, izay nisy ny tombony, araka ny ho hitantsika. Na izany aza, ampiasaina be izao izy amin'ny fampiasana fitaovana elektronika, toy ny fitaovana audiovisual, solosaina, sns. Ho azy rehetra miasa amin'ny tambajotra elektrika izay mifandimby, ny fitaovana mpanitsy dia ampiasaina amin'ny fanovana, toy ny adaptatera na famatsian-jiro.
Na eo aza ny ankehitriny polarity tsy dia ifotony loatra izany, raha ny diany mivantana dia zavatra tena manandanja izy io, ary tsy maintsy hajaina izany raha toa ka mandeha araka ny tokony ho izy ny faritra fa tsy simba. Ny fanovana ny polarity ao amin'ny DC dia mety hidika ho fahasimbana tsy azo ovaina amin'ny tranga sasany, noho izany dia mila mitandrina ianao amin'izany.
Izany no antony mahazatra ny mahita terminal na tariby voamarika amin'ny tsangambaton'izy ireo, na loko manavaka azy. Amin'ny ankapobeny, ny mena dia ampiasaina amin'ny tsato-kazo tsara (+), ary ny mainty ho an'ny ratsy (-). Ny faribolana DC somary sarotra kokoa dia afaka manampy loko fanampiny koa.
Inona no atao hoe AC?
La fifandimbiasana ankehitriny, nohafohezina hoe CA (na AC amin'ny teny Anglisy), dia karazana onja elektrika izay manana ny halehibeazany sy ny làlany miovaova amin'ny bisikileta, amin'ny vanim-potoana. Midika izany fa tsy toy ny CC, izay tsipika mahitsy aseho amin'ny sary, raha ilay mifanolo dia aseho azy ho oscillation sinusoida. Ny isan'ireo tsingerina feno isan-tsegondra dia miankina amin'ny faharetan'ny tsingerina. Ohatra, any Eropa isika dia manana 50 Hz, na in-50 isan-tsegondra, raha any Etazonia kosa dia miasa amin'ny 60 Hz.
Ity fisehoan-javatra ity dia hiseho amin'ny 1832, rehefa namorona ny Pixii alternator voalohany, mpamokatra dynamoelectric, mifototra amin'ny fitsipiky ny Faraday. Taty aoriana, Pixii dia nanampy koa ny switch mba hamoahana mivantana ankehitriny, izay nampiasaina kokoa tamin'ny andro taloha. Tamin'ny taona 1855 dia voafaritra fa ambony noho ny DC ny AC ary farany nanolo azy.
Ny teknolojia mifandimby ankehitriny novolavolaina tany Eropa, noho ny asan'i Guillaume Duchenne tamin'ny taona 1850. Tamin'ny 1876, injeniera Rosiana koa dia hamorona rafitra jiro mitovy amin'ny an'i Edison, fa kosa misy AC mahery vaika. Ny orinasa Ganz Works any Budapest dia nanomboka nanamboatra fitaovana fanaovan-jiro mifototra amin'ireo fitsipika ireo, ho fanampin'ny fitaovana hafa mifototra amin'ity renirano ity.
Ilay injeniera Serba ary mpamorona Nikola Tesla, dia iray amin'ireo mpiaro lehibe indrindra an'ity ankehitriny ity manohitra ny fitohizan'i Edison. Izy no namolavola sy nanamboatra ny motera fampidirana ankehitriny mifandimby, izay afaka manova ny angovo herinaratra ho mekanika mihodina. Ho fanampin'izany, ity genius ity dia hanampy amin'ny fanatanterahana ireo rafitra fizarana herinaratra tsy misy fanovana ny tsipika.
Ankoatr'izay dia nanadihady fitaovana iray novokarin'ny injeniera eropeana antsoina hoe Tesla mpanova. Misaotra an'io fa azo ovaina ho voltre ambany izy io, ary ho azo antoka kokoa ho an'ny trano, nefa tsy mila tonga amin'ny habetsaky ny namokarana azy, satria ny iray amin'ireo tahotra lehibe indrindra dia ny mampidi-doza. Ireo famotopotorana ireo dia ho fiandohan'ny antso Ady amin'ny onja ankehitriny.
Ny patanty rehetra mifandraika amin'ny CA Nikola Tesla dia notendrena ho an'ny orinasa Westinghouse Electric, hanangonana renivohitra ary hanohizana ireo tetikasa mifototra amin'ity fironana ity. Aorian'izany, ny fandefasana CA voalohany dia tsy ho ela, nitranga tamin'ny 1891. Hitranga izany any Telluride (Colorado), volana vitsivitsy taty aoriana any Eropa ihany koa, avy any Lauffen mankany Frankfurt (Alemana).
Rehefa nandresy ny AC ary niely nanerana an'izao tontolo izao, dia nanohy nanohana ny hisian'ny mivantana mivantana i Thomas Edison, zavatra iray izay handaniany ny toerany amin'ny orinasa. Edison herinaratra (antsoina ankehitriny hoe General Electric), izay izy tenany no nanangana ...
Alternating ankehitriny no ampiasaina ho an'ny indostria sy ho an'ny trano, dia ilay mandeha amin'ny alàlan'ny herinaratra mitondra herinaratra amin'ny lafivalon'izao tontolo izao. Izy io dia afaka mihazakazaka ny fitaovana ao an-trano, ny motera, ny milina indostrialy, ny rafitra fampangatsiahana, ary maro hafa.
Araka ny efa nolazaiko teo, rehefa mampifandray a plug, tsy mitandrina mihitsy ianao amin'ny fomba ametrahanao azy satria hiasa na ahoana na ahoana. Izany dia vokatry ny endrika onjan'ny onja mifandimby, satria hifandimby izy io. Na izany aza, ho an'ny fametrahana mahazatra, misy ihany koa ny fomba hanavahana ny tariby, sns. Amin'ny ankapobeny ianao dia manana tariby mavo / maitso izay ny tany, tariby manga na fotsy no tsy miandany, ary ny volontsôkôlà na mainty no ho dingana.
DC vs AC: tombony sy fatiantoka
Ireo renirano roa ireo dia mbola be mpampiasa ankehitriny, toy ny misy azy ny tombony sy ny fatiantoka. Ohatra:
Ny fifandimbiasana ankehitriny dia tena mora ovaina, zavatra tsy hitranga amin'ny ony mivantana.
Mba hanovana ny herinaratra, amin'ny fifandimbiasanao ankehitriny dia mila mampiasa mpanova fotsiny ianao, raha toa kosa amin'ny fotoana mivantana dia mila mampifandray dinamoza na mpamokatra herinaratra amin'ny andiany ianao, izay tsy azo ampiharina.
Ny arus mifandimby dia azo zaraina amin'ny halavirana lavitra miaraka amin'ny hamafin'ny onja ankehitriny, very kely amin'ny endrika hafanana noho ny vokatr'i Joule sy ireo vokatra hafa toy ny onja mando na hysteresis. Raha manana fatiantoka goavambe ny DC, ary ilaina ny fananana tobin-herinaratra marobe akaikin'ny teboka fangatahana.
Fanovana AC / DC
(jereo ny famatsiana herinaratra)
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitaovana maimaim-poana » fampianarana » Fifandimbiasana ankehitriny sy ankehitriny mivantana: fahasamihafana sy fitoviana